हामी कता जादै छौ ? - राष्ट्रखबर
राजनीति हामी कता जादै छौ ?
हामी कता जादै छौ ?
February 23, 2021 February 23, 2021 rastrakhabar 0
देशको चिन्ता राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई हुने थियो भने यो देश धेरै पहिले देखि बन्थ्यो । जनता भोका नाङगा र बेरोजगार छन । जनताको पीडा सुन्ने र बुझने नेताको अभाव छ यहाँ । हिजो चप्पल लगाएर काठमाडौ छिरेका नेताहरुको काठमाडौमा अलिसान महल र प्रशस्त बैक ब्यालेनस छ । आन्दोलनमा जनताले टाउको फुटाउनु पर्ने फाइदा नेताले लिने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? बेला बेलामा प्रश्न उठने गर्छ । प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेताहरुले शासन गर्न थालेको हिसाव गर्ने हो भने मोटामोटी तीन दशक भन्दा बढि भैसक्यो ।
यो अवधिमा जनताको अवस्था फेरिन सकेको छैन । कुनै पनि देशमा यति धेरै समय सम्म शासन गर्दा पक्कै पनि देशको मुहार फेरिन्छ । दल र तिनका नेताहरुको हातमा देशको शासन सत्ता पटक पटक पुग्यो । तर हाता लाग्यो शून्य । यो तरिकाले देश बन्दैन । सीमित नेता मोटाउने जनता भोका हुने अवस्था कायम रहिरहेयो भने बिद्रोह हुन सक्छ । यो बिषयमा गम्भिर हुन सवै जरुरी छ । हामी कता जादै छौ र देशलाई कता लैजादै छौ ।
सत्तामा पुगे पछि नेताहरु एक आपसमा लडने काम धेरै पहिले देखि सुरु भएको हो । यो परम्परा र सस्कृति अझै कायम छ । जस्ले गर्दा देश र जनताले दुख्ख भोग्नु परिरहेको छ । लामो समय देखि जनताले कष्ट भोग्नु परिरहेको छ । राज्य सञ्चालकहरु इमान्दार भएनन । यदि इमानदार हुन्थे भने देश र जनताले दुख्ख पक्कै पाउने थिएनन । नेताहरुले जनताको मतको अपमान गरे ।
जनताप्रति उत्तरदायी भएनन । देशका युवा खाडी तथा अन्य मूलुकमा पलायन छन । यो रहर होइन बाध्यता हो । राज्यकोषको दुरुपयोग भएको छ । कहाँ के कति खर्च भयो खोज्ने आँट कसैले गदैनन । देश आर्थिकरुपमा धराशायी बन्दै छ । यो बडो चिन्ताको बिषय हो । हिजो चुनावमा बाचा गरेका सवै कुरा बिर्सिएर नेताहरु सत्ता स्वार्थमा लडिरहेका छन । यो भन्दा लाज लाग्दो कुरा अरु के हुन सक्छ ? हामी आफै सोचौं । देश बनाउछौ भन्नेहरु नै सत्ता स्वार्थमा लडिरहेका छन । अव जनता आफै जाग्नु पर्ने बेला भएको छ । यो तरिकाले देश उभो लाग्दैन । देशको हितका बारेमा लेख्दा कसैलाई यो कुरा तितो लाग्न सक्छ ।
तितो भए पनि कुरा सत्य हो । जनताको पक्षमा कलम चलाउदा कसैलाई नराम्रो लाग्छ भने मैले के भनु । राजनीतिको नाममा ब्यापार हुनु भएन । मैले भन्न खोजेको कुरा यो हो । राजनीतिक परिवर्तन पछि धेरै सरकार बने तर जनताले देशमा सरकार भएको कुनै समय पनि महसुस गरेनन । जति सरकार बने पनि नेता बने तर देश र जनता बन्न सकेनन । नेता सम्पन्न बनेर मात्र देश बन्दैन । सवै भन्दा पहिला देश र जनता सम्पन्न हुनु प–यो भन्ने मेरो भनाई हो । जव सम्म जनता सम्पन्न हुन सक्दैनन तव सम्म देश बन्दैन ।
मेलम्ची खानेपानी सुरुङको परिक्षण सफल
पालिका स्तरिय नृत्य प्रतियोगिता एवम् सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न